Raha araka ny fantatra mantsy dia diso be loatra ny fitarainan’ny mponina mikasika ny asa fanendahana mitranga eny amin’ity faritra ity ka nidina ifotony nanao fanaraha-maso izy ireo. Tsy hanavahana sokajin’olona na ora intsony izany fa misy fanendahana miseho hatrany ka ny vehivavy sy ny ankizy no tena lasibatra. Teo amin’i Tetezan-dramala mihitsy moa izy roalahy ireo no tratra teo am-panaovana ny asa ratsiny. Na izany aza tsy nisy zavatra azon'ireo jiolahy. Nentina namonjy ny birao avy hatrany izy roalahy ireo natao fanadihadiana.